प्रश्नपत्र बेचेर कमिसन खान पल्किएका उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्का सहसचिव अख्तियारको फन्दामा !
ARCHIVE, MUDRA MAMILA » प्रश्नपत्र बेचेर कमिसन खान पल्किएका उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्का सहसचिव अख्तियारको फन्दामा !
काठमाडौँ- उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदका तत्कालीन सह-सचिव देवीप्रसाद वाराकोटी अख्तियारको कारवाहीमा परेका छन् । सह सचिव हुँदा छात्रवृतिमा ठुलो घोटाला गरेको ठहर गर्दै उनी कारवाहीमा परेका हुन् । अख्तियारले उनीसँग तीन करोड २० लाख रुपैयाँ मागदावी गरेको छ । यता वाराकोटीले गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति श्रीमतीको नाममा लुकाएको देखिएको भन्दै ती चल/अचल सम्पत्तिहरू जफत गर्ने प्रयोजनको लागि प्रमिला उप्रेतीलाई समेत प्रतिवादी कायम गरेको छ ।
प्रश्नपत्र छपाई, छात्रवृति वितरण लगायतका काममा घुस लिएर अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै उनीमाथि परेको उजुरीका आधारमा अनुसन्धान गर्दा उनी कारवाहीमा परेका हुन् । उनलाई प्रश्नपत्र बेचेको समेत आरोप लागेको थियो ।